ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ တောင်နဝင်း ပင်မရေလှောင်တမံ၏ ထိပ်မျက်နှာပြင်တွင် အက်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်မ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၅
ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ တောင်နဝင်းပင်မရေ လှောင်တမံ၏ ထိပ်မျက်နှာပြင်တွင် အက်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တမံအောက်ဘက်ရှိ ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် စိုး ရိမ်ပူပန်မှုမရှိစေရေး အသိပေး ရှင်းလင်းမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊မွေး မြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ဇန်နဝါရီ၂၅ ရက်သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဇန်နဝါရီ၈ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့ နယ်အတွင်းရှိတောင်နဝင်း ပင်မ ရေလှောင်တမံ၏ပေတိုင် ပေ (၆ဝဝဝ) မှ ပေ (၆၁ဝဝ) အကြား တမံထိပ် ပြင်(Crest) တွင် အလျား (၁ဝဝ) ပေခန့်၊ အနက် (၃) ပေခန့်၊ အကျယ် (၃) လက်မခန့်ရှိ ကန့်လန့် ဖြတ် အက်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး နောက် တမံကိုယ်ထည်မြေသားလှုပ် ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် အက်ကြောင်းအတွင်းသို့ သဲကြမ်းများဖြည့်ထည့်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် အက် ကြောင်းအတိုင်းအတာ ပမာဏ ပြောင်းလဲလာမှု ရှိ၊ မရှိ၊ တမံထိပ် မျက်နှာပြင် နိမ့်ကျပြောင်းလဲလာမှု ရှိ၊ မရှိ၊ တမံကိုယ်ထည် (Dam Body) မှာနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျား မှု ရှိ၊ မရှိစောင့်ကြည့်တိုင်းတာစစ် ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယနေ့ထိပြောင်းလဲ မှု၊ ရွေ့လျားမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရ သည်။
ယင်းအပြင် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်နှင့် ၁၉ရက်များတွင် ဆည် မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲ ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒီဇိုင်းပညာရှင်နှင့် ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့မှလည်းကောင်း၊ ဂျပန် (ဦဗ) ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) ဆည်ရေသောက်စနစ်များ ပြုပြင်ခြင်း၊ စီမံကိန်းမှ ဂျပန်အတိုင် ပင်ခံပညာရှင် မြ.သြမင မှလည်း ကောင်း၊ တောင်နဝင်းပင်မရေ လှောင်တမံသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ပညာရှင်များ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသုံးသပ်ချက် ရေလှောင် တမံတည်ရှိရာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုများ၏ သက် ရောက်မှုကြောင့် တမံအောက်ခြေ အုတ်မြစ်ကျောက်သားတွင် လှုပ် ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး တမံထိပ်မျက် နှာပြင် (Crest) ၌ အက်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံး သပ်ထားသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”လက်ရှိဖြစ်စဉ်ရဲ့ အခြေအနေက စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အ ခြေ အနေမရှိပါဘူး။ဌာနက(၂၄)နာရီအချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်တိုင်းတာ စစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။တမံ ကိုယ်ထည်နဲ့ အောက်ခံအုတ်မြစ် အခြေအနေများကို ဘူမိဗေဒဆိုင် ရာစူးစမ်းတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာများဖြင့် အသုံးပြု၍စူးစမ်းတိုင်းတာ ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဒီနေ့စတင်စီမံ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဘူမိဗေဒ ဆိုင်ရာစူးစမ်းတိုင်းတာမှုများအရ တွေ့ရှိမှုများကိုအခြေခံ၍ ရေ လှောင်တမံကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ဘေးကင်း လုံခြုံမှုအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီစီမံဆောင် ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
နည်းပြဆာရီ၏ ဝေဖန်မှုအပေါ်ဂရုမစိုက်ကြောင်း ဟာဇက်တုံ့ပြန်၊ လိဂ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက်နိုင်?
ချန်ပီယံလိဂ် အကောင်းဆုံး အသင်းတွင် ရီးရဲလ်ကစားသမား ရှစ်ဦးအထိ ပါဝင်
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး တိုင်းပြည်၏ အလံအမည်နာမ ပြောင်း??
စစ်ကိုင်း တရုတ်ဆီးသီးပင်များ အသီးထွက်နည်းသဖြင့် စစ်ကိုင်းသီးနှင့်တူသော ဟုန်ပန်းသီးများ ဈေးကွက်အတွင်း အရောင်းတွင်ကျယ်
တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန်ရှိ ဆေးဝါး သိုလှောင်ရေးဂိုဒေါင် ပထမထပ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်
မြောင်းမြတံတားသစ် တည်ဆောက်ခြင်းတွင် ဘေးပေါင်ကာခြင်းနှင့် ချဉ်းကပ်လမ်းပြုလုပ်ခြင်းသာ ကျန??